China Silicone Rubber Sheet Kune Solar Laminator vagadziri uye vanotengesa | Cayce Chivabvu
Hunhu hupenyu hwebhizinesi. Iyo kambani inonamira kukoshesa kukuru mukutonga kwehunhu hwechigadzirwa. Iyo ine boka rehunyanzvi hwemhando yepamusoro manejimendi vashandi, akashongedzerwa nehunyanzvi hwechigadzirwa marabhoritari, makamuri ekuyedza, uye marabhoritari.
Hunhu ihwo hupenyu hwebhizinesi. Iyo kambani inonamira kukoshesa kukuru mukutonga kwehunhu hwechigadzirwa. Iyo ine boka rehunyanzvi hwemhando yepamusoro manejimendi vashandi, vakagadzirwa nehunyanzvi chigadzirwa ma laboratories, makamuri ekuyedza, uye marabhoritari. Munguva yekugadzirwa, inonamira kugadzirwa kwakaenzana uye inovaraidza nyika neindasitiri. Maitiro uye zviyero zvehukama zvinoita kuti zvigadzirwa zvibudirire zvinodiwa nevashandisi. Zvigadzirwa zveCaycemay Kambani zvinosanganisira mhando dzese dzemabasa dzinogadzirwa nevanhu pasirese, uye zvimwe zvigadzirwa zvakaenda kunze kwenyika uye pasi. Chiyero chayo chekugadzira, mhando, mutengo, kuendesa, uye sevhisi yakahwina kurumbidzwa kwakakwirira kubva kune vatengi uye inonakidzwa nemukurumbira wakakwirira.
Zvigadzirwa zvekambani zvinovavarira zvigadzirwa zvepamusoro-giredhi, uye edza kugaya uye kupinza tekinoroji yekunze kutsiva kupinzwa kunze uye kuwedzera chiyero chemunharaunda. Iyo tara-inodzosera tarpaulin yemotokari dzenjanji yakapihwa kumakambani ekunze. Silicone machira anotora hafu yeminda muma solar laminators, girazi, huni, makadhi mats, nezvimwe .; rabha yekuisa chisimbiso zvinhu mu petrochemical indasitiri yakafarira mukurumbira wepamusoro;
Silicone rabha pepa rezuva laminator, Caycemay yakakwira-inosemesa-isingagadzirwe silicone jira inoshandisa nyika-inozivikanwa zvigadzirwa, zvigadzirwa zvemberi zvepamutemo uye yakasarudzika michina gungano mutsara kugadzirwa, chigadzirwa chine kugadzikana kwakakwirira uye kuvimbika kwakanaka, uye inyanzvi inoshandiswa kumagetsi ezuva, nezvimwewo. midziyo
Ichi chigadzirwa chinounza acid-inodzivirira, yepakati-isingagadzirike, yakanyanya-tembiricha-inodzivirira zvakatipoteredza inoshamwaridzika yakasimbiswa michina uye yakasarudzika masisitimu echinhu pahwaro hwepakutanga zvakatipoteredza zvine hushamwari silica gel bhodhi. Nekudaro, iyo tensile simba, kubvarura simba, uye kuenzana kugadzikana kwesilicone ndiro yakagadziridzwa zvakanyanya, uye hupenyu hwehupenyu hwechigadzirwa hwakareba.
Iyo zvakare ine mukana wekuti kana iro jira rerabha yashandiswa kune muganho, hazvizokonzere kukuvadza kune rezuva cell module. Iyo yakakwira upamhi inogona kusvika 4000mm isina seams.
Kuoma (Mahombekombe A) 60 ± 2
Kubvarura simba Mpa≥ 10.5
Kubvarura simba N / mm≥ 40
Kupisa kwekushisa ℃ 200
EVA inodzivirira (ichienzaniswa) kugona
Pashure: Silicone Rubber Cushion YeKadhi-inogadzira Laminator
Zvadaro: Silicone Rubber Sheet Kune Girazi Indasitiri
Yakakwira Temp Silicone Rubber Sheet
Yasimbiswa Rubber Sheet
Gobvu Rubber Sheet